Farmaajo oo kulan la qaadanaya Waalidiinta dhallinyaradii la laayay | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo kulan la qaadanaya Waalidiinta dhallinyaradii la laayay
Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la qaadanaya waalidiinta dhallinyaradii lagu laayay maqaayadda Gelato Divino ee magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xasuuq wadareedkii ka dhacay maqaayadda Gelato Divino ee ku dhaw koontaroolka laga galo Garoonka diyaadaradaha ee Aaddan Cadde International Airport waxaa lagu laayay dhallinyaro 8 ruux ah kuwaasoo maqaayadda bannaankeeda fadhiyay.
Madaxweynaha JFS Maxamed Farmaajo oo aan horay uga tacsiyeen xasuuqaasi ayaa maanta isugu yeeray waalidiinta dhallinyaradii la laayay, lama oga qorshaha iyo ujeedada kulankan, balse madaxweyne Farmaajo ayaa ku jira xilligii Kaambeynka, waxa uuna u hanqal taagayaa sidii uu ku soo laaban lahaa mar kale, tacsi waqtigeeda la dhaafay oo aanay diintu raalli ka ahayn ayuu madaxweynaha ugu yeeray waalidiinta sida aan ku heleeno warar hoose oo kulankaas ku saabsan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xilligii la dooranayay 2017 waxa uu golaha shacabka ka hor akhriyay waraaq dheer oo ay ku qoran yihiin balln-qaadyo tira badan kuwaasoo ay kamdi ahaayeen qofkii ku geeriyooda qarax in reerkiisa mag-dhaw laga siin doono, ballantaasi waxay noqotay mid aan soo dhaafin afka baarkiis, mana jirto qoys ku waxyeelloobay qarax ee uu booqday madaxweynuhu iskaba daa in uu wax siiyee.
Inta badan xilliga lagu guda jiro Ololaha doorashada madaxtinimada shakhsiyaadka siyaasiyiinta ah waxay isku dayaan in ay bulshada tusiyaan ficil wanaagsan oo loogu aqoonsanayo in uu yahay musharax u qalma xilkan.